Optimization sy fanatsarana ny vy fanariana akorany bobongolo dingana fanariana | Yingyi
Optimization sy fanatsarana ny vy fanariana akorany bobongolo dingana fanariana
Fanariana akorandriakadia ny fampiasana ny fasika mifono ho akora, ny bobongolo dia nafanaina ny mari-pana, amin'ny alalan'ny fasika fitifirana, insulation mba hanao mifono fasika solidification, lasitra, mamorona sasany hatevin'ny akorandriaka, ny ambony sy ny ambany akorany mifamatotra miaraka amin'ny binder, mamorona lavaka feno ho an'ny fanariana molding castings. Ny fanariana akora dia manana ny toetran'ny fampiasam-bola kely amin'ny fitaovana, ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, ny tsingerina fohy, ny vidin'ny famokarana ambany, ny vovoka kely ao amin'ny toeram-pamokarana, ny tabataba ambany, ny fandotoana ny tontolo iainana, ny fandotoana avo lenta amin'ny fanariana, ny habeny sy ny fahombiazan'ny dingana, ary efa be mpampiasa amin'ny fiara, môtô, fanorenana milina sy ny indostria hafa.
Hatramin'ny nampidirana ny fizotry ny fanariana akorandriaka, ny famokarana vy vita amin'ny akorandriaka azo antoka sy mahomby dia tratra. Na izany aza, ny hodi-boasary makirana sy ny fasika mipetaka eo ambonin'ny fanariana dia hita fa tena matotra amin'ny famokaranafanariana vy, ary ratsy ny kalitaon'ny surface. Ny ampahany amin'ny hodi-boasary sy ny fasika mipetaka amin'ny vokatra tsy mety dia mahatratra 50%, izay mampihena ny fahombiazan'ny fanadiovana sy ny kalitaon'ny vokatra.
1.1 Fampidirana fohifohy ny fizotran'ny famokarana tany am-boalohany
Famokarana ampahany amin'ny vokatra vita amin'ny vy, mampiasa akorandriaka fasika dingana fanariana, Karazana tapany roa, boaty roa sosona, mampiasa akorandriaka mekanika fitifirana fasika mivadika roa tonta.
1.2 Ampahany sy toerana misy lesoka
Ny toerana sy ny isan'ny kilema dia nodinihina, ary ny hodi-boasary makirana sy ny fasika miraikitra kilema dia hita indrindra teo amin'ny vavahady anatiny sy ny ambonin'ny fanariana.
2 famakafakana kilema sy antony
2.1 Mekanisma fananganana kilema
Ny hodi-boasary dia manondro ny tavy na fivontosana miforona eo amin'ny fanariana rehefa mifangaro ny metaly sy ny fasika mamolavola eo amin'ny fanariana. Ao amin'ny fanariana, akorandriaka ambonin'ny noho ny fikosoham-bary tsy tapaka ny mari-pana ambony ranon-javatra, niafara tamin'ny akorandriaka ambonin'ny firodanan'ny eo an-toerana, nirodana ny fasika sy ny vy nitsonika miaraka amin'ny lavaka ao amin'ny fanariana ambonin'ny niforona protruding takaitra, izany hoe ny fananganana ny voasary Peel, scar sy ny kilema hafa. , Ny vokatra vita amin'ny vy dia tsy dia fahita firy amin'ny vokatra vita amin'ny vy. Ny fasika mipetaka dia lesoka eo amin'ny tontolon'ny fanariana. Sarotra ny manaisotra ny burr na ny fitambarana miforona amin'ny fasika sy ny oxide metaly miraikitra amin'ny tampon'ny fanariana, ka miteraka fanariana masiaka, izay matetika mampitombo ny enta-mavesatry ny fanadiovana fanariana, mampihena ny fahombiazan'ny famaranana ary misy fiantraikany amin'ny endriky ny fanariana. vokatra.
2.2 Famakafakana ny antony
Miaraka amin'ny rafitra fananganana fasika mipetaka sy hodi-boasary, dia azo tsaraina fa ny antony mahatonga ny fasika mipetaka sy ny hoditra voasary eo ambonin'ny vy vita amin'ny akorandriaka dia toy izao manaraka izao:
(1) Nandritra ny dingan'ny fandatsahana, ny mari-pana amin'ny vy miendrika dia avo, ary ny fanariana akorandriaka akaikin'ny vavahady dia nafanaina nandritra ny fotoana ela. Satria ny akorandriaka fasika mifono dia mora mirodana sy mafana mandritra ny fotoana maharitra, ny akorandriaka fasika amin'ity ampahany ity dia mafana loatra, ary ny firodanan'ny akorandriaka fasika eo ambonin'ny lavaka dia miteraka ny fisehoan'ny fasika mipetaka sy ny hoditra voasary eo amin'ny tany. ny fanariana;
(2) Manify ny sosona manasitrana ny akorandriaka fasika ary ambany ny tanjaky ny akorandriaka. Rehefa avo ny mari-pana fandatsahana na lava ny fotoana fandrotsahana ny vy miendrika ary lehibe ny tanjaky ny fandrotsahana, dia mora vaky sy tapaka ny endrik'ilay akorandriaka fasika, ka mitarika ho amin'ny "infiltration" ny vy mitsonika ao anaty fasika. akorandriaka, na ny poti-pasika tapaka sy ny vy anidina dia mivaingana mba hamorona ny kilema ny fasika miraikitra;
(3) Ny refractoriness ny fasika mifono dia ambany. Rehefa miditra ao amin'ny lavaka ny vy voarendrika, dia nanomboka nirodana ny eny ambonin'ny vozon'ny akorandriaka fasika alohan'ny fanamafisana ny vy voarendrika, izay mitarika ho amin'ny "infiltration" ny vy miempo ao anatin'ny akorandriaka fasika, na ny fasika tapaka. mivaingana miaraka amin'ny vy mitsonika ny poti ka lasa fasika miraikitra;
(4) Ny fiantraikan'ny herin'ny sprue dia lehibe, ary ny ampahany amin'ny sprue amin'ny fotoana famafazana no lava indrindra, ny sprue dia mifandray mivantana amin'ny vavahady anatiny, rehefa nirohotra nankany amin'ny sprue ny vy vita amin'ny hafanana avo ao amin'ny lavaka, noho ny mankany amin'ny fikorianan'ny vy miempo mikorontana, mitarika mankany amin'ny fakan'ny vavahady fasika akorandriaka mirodana, fasika mitsingevana miaraka amin'ny vy rano ao anaty lavaka.
3. Fitsapana sy famakafakana fanatsarana ny dingana
3.1 Ampidino ny mari-pana fandrarahana
Ny fasika mifono ampiasaina amin'ny fanariana vy dia fitaovana quartz refractory. Ny hafanan'ny fanariana dia avo loatra na ny hafanana eo an-toerana, izay mora mirodana, mitetika, fasika fasika ary tranga hafa, ka miteraka fasika mipetaka, hoditra voasary ary kilema fanariana hafa. Ao amin'ny dingan'ny famokarana akorandriaka bobongolo, mba hampihenana ny vidin'ny famokarana, akorandriaka bobongolo fanariana dingana amin'ny ankapobeny dia tsy mampiasa refractory coating, mivantana aorian'ny fanariana. Ny faritra akaikin'ny vavahady anatiny amin'ny fanariana dia ampiasaina ho fidiran'ny rano. Ny hafanan'ny vy voarendrika dia avo, ary ny ampahany amin'ny akorandriaka fasika dia mafana be mandritra ny fotoana maharitra. Mipoitra ny endrik'ilay akorandriaka fasika, ary mitohy ny vy mitsonika amin'ny hafanana ambony, ka miteraka fasika miraikitra sy hodi-boasary. Raha tsy misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny mari-pana fandatsahana dia tokony hihena araka ny tokony ho izy, ary ny fanariana akorandriaka dia fanariana akorandriaka mangatsiaka. Ny mari-pana fanariana dia tsy tokony ho ambany loatra mba hisorohana ny fitokana-monina mangatsiaka. Noho izany, ny fampihenana ny mari-pana fanariana dia afaka manatsara ny kalitaon'ny tany amin'ny lafiny iray, saingy tsy afaka mamaha tanteraka ny olan'ny volom-boasary sy ny fasika mipetaka amin'ny tany.
3.2 Hatsarao ny hatevin'ny sosona mivaingana amin'ny akorandriaka fasika
Manify ny sosona manasitrana ny akorandriaka fasika ary ambany ny tanjaky ny akorandriaka. Rehefa avo ny mari-pana fandatsahana na ny fotoana fandroahana ny vy miendrika dia lava ary ny tanjaky ny flushing dia lehibe, ny ambonin'ny akorandriaka fasika dia mora vaky sy mirodana, mitarika ho amin'ny "infiltration" ny vy voarendrika ho ao anaty akorandriaka fasika, na ny poti-pasika tapaka dia mivaingana amin'ny vy miendrika ho lasa fasika miraikitra sy hodi-boasary. Ny sosona akorandriaka dia manify loatra, mihena ny tanjaky ny akorandriaka fasika, ary misy ny mety hisian'ny fahatapahan'ny hafanana be loatra sy ny fanasan'ny fasika mandritra ny fandatsahana. Satria io ampahany io dia misy fiantraikany mivantana amin'ny vy miendrika, ny tanjaky ny akorandriaka fasika eto dia mifandray mivantana amin'ny kalitaon'ny fanariana. Ao anatin'ny fizotran'ny famokarana mitohy, dia mangatsiaka haingana ny bobongolo, ka miteraka ny fisehoan'ny famokarana fasika sy ny akorandriaka fasika tsy matotra. Raha matevina loatra ny fanambanin'ny sprue, dia hitarika ho amin'ny fandoroana ny faritra hafa amin'ny akorandriaka fasika ny fotoan'ny crust, ary hihena ny tanjaky ny fasika. Aorian'ny fanatsarana, ny akorandriaka fasika dia hihamatanjaka tanteraka amin'ny famokarana mitohy tsy misy fasika sy hoditra ary taolana.
3.3 Manatsara ny refractoriness ny fasika mifono
Ny fasika voafono dia manana refractoriness ambany. Rehefa miditra ao amin'ny lavaka ny vy miendrika, dia nanomboka nirodana ny eny ambonin'ny vozon'ny akorandriaka fasika alohan'ny fanamafisana ny vy miendrika, izay mitarika ho amin'ny "infiltration" ny vy miempo ao anatin'ny akorandriaka fasika, na mivaingana ny poti-pasika tapaka. miaraka amin'ny vy miendrika ho fasika miraikitra. Taorian'ny fanitsiana ny firafitry ny fasika mifono, ny kely batch fanamarinana nampiseho fa ny volomboasary Peel tranga eo amin'ny fanariana ambonin'ny dia tena nesorina, fa ny miraikitra fasika tranga mbola nisy, ary ny kilema ny fasika mipetaka eo amin'ny vokatra ambonin'ny tsy azo voavaha tanteraka.
3.4 Amboary ny famolavolana rafitra gating
Ny rafitra fandatsahana dia manana fiantraikany lehibe amin'ny fahazoana casting avo lenta. Ao anatin'ny dingan'ny famenoana bobongolo dia tapaka mialoha ny akorandriaka fasika eo akaikin'ny vavahady, ka vy mitsonika "miditra" ao anatin'ny akorandriaka fasika na poti-pasika tapaka mivaingana amin'ny vy miendrika, ka miteraka lesoka toy ny fasika mipetaka sy ny hoditra voasary. akaikin'ny vavahady sy amin'ny fiaramanidina lehibe. Ny fampihenana ny herin'ny vy mitsonika eo ambonin'ny akorandriaka fasika sy ny fampitomboana ny fahafahan'ny rafitra fandatsaham-bato dia mety hanatsara ny fisehoan'ny fasika mipetaka sy ny hoditra voasary eo ambonin'ny vokatra. Ny rafitra fanariana mikoriana tsy mitsaha-mitombo dia heverina ho solon'ny rafitra fanariana tany am-boalohany, izay mahatonga ny vy mitsonika miditra ao amin'ny lavaka stable ary mampihena ny tanjaky ny fikapohana ny akorandriaka bobongolo. Ny endriky ny spate dia mampiasa trapezoid fisaka, izay afaka mampihena ny fikorianan'ny korontana mikoriana ny ranon-javatra vy scour ny fasika akorandriaka. Ny halavan'ny sprue dia tokony ho fohy araka izay azo atao mba hampihenana ny lesoka toy ny fitokana-monina mangatsiaka sy ny tsipika mikoriana noho ny fampangatsiahana ny vy mitsonika.